[OFFICIAL] dr.fone - iOS Private Data Irabha: Irabha iPhone unaphakade
dr.fone toolkit - iOS Private Data Irabha
Kalula Sula Your Data Personal ngedivaysi yakho
Ukhethe ukuba yeyiphi idata ofuna ukucima.
Ufake iinkcukacha zakho ziza kukukhusela ngamasela yesazisi. dr.fone toolkit - iOS Private Data Irabha uya scan ifowuni yakho ukuba iinkcukacha zabucala ze uvumele wena ukhethe izinto ukuze unaphakade.
Yonke into Erasable
Amafoto, imiyalezo, abafowunelwa, amanqaku, Safari bookmarks kunye nembali yakho call zezinye izinto isuswe. Idatha acinywe usebenzisa lo iOS Private Data Irabha andinakuze wachacha.
Sula iPhone: Skena kwaye kuqala data yakho eyimfihlo for free
Ungasebenzisa le yokucima iPhone ukuskena ifowuni yakho uze kuqala zonke iinkcukacha zabucala wafumana enye kwenye. Kungenxa simahla.
Sula iPhone: Bobabini isusiwe kunye nobumfihlo esele ikhona lwesityibilikisi
ukubonisa nje kuphela yaye sula iinkcukacha zabucala ekhoyo kwifowuni yakho, kodwa kwakhona ukufumana ulwazi lwakho kulandwa zabucala kwi iPhone yakho okanye iPad, kwaye susa oko ngokusisigxina ukuze kungabikho bani eyokubona.
Sula iPhone: ndikwazi ukuyicima iintlobo ezininzi data yangasese
Le irabha iPhone yenza ukuba ukusula data zabucala ezifana iifoto, imiyalezo, abafowunelwa, ubize imbali, amanqaku, neekhalenda, izikhumbuzo kunye Safari amanqaku encwadi.
Sula iPhone: 1 nqakraza ukucima yonke okanye emane ukucima izinto njengokuba ufuna
Unga khangela yonke isiphumo scan uze ususe yonke idatha ngokucofa kanye. Okanye unokukhetha ukuzicima izinto awufuni ukugcina.
Sula iPhone: Sula lonke touch iPhone, iPad ne iPod
Enoba ukuba usebenzisa i iPhone yakutshanje 7, iPad Pro, okanye iPhone omdala 4, iPad 1, le datha irabha iPhone isebenzisane ngokupheleleyo yonke imizekelo iPhone, iPad kunye iPod.
Le irabha iPhone Idatha efundwayo kuphela ngokupheleleyo software. Oku kuthi, aguqule okanye ukuvuza nayiphi na idatha kwidivaysi yakho. Sithatha data yakho yobuqu akhawunti nzulu. Wena sihlale njalo umntu kuphela ngubani na ukufikelela kuyo.
Sula Naziphi Iindidi Privacy on iPhone / iPad
Yintoni isusa iPhone yakho? Ungasebenzisa esi sixhobo ukususa inkcazelo yabucala kwi iPhone yakho, kuquka iifoto, imiyalezo nezifakelo, abafowunelwa, ubize imbali, amanqaku, neekhalenda, izikhumbuzo kunye Safari amanqaku encwadi.
data wasuswa iphelile ngonaphakade.
Kalula lizakucima yonke i data evela kwifowuni yakho. Kwaye akukho mntu unokuze lulama nokubonisela data yakho.